Wakiilada Trump oo ka dayriyey khatarta ay leedahay dacwada xilka qaadistiisa
January 21, 2020 Mahad Jama 0
LONDON(P-TIMES)- Qareenada difaacaya madaxweyne Donald Trump ee ku matelaya dhageysiga dacwadda aqalka sare ayaa dalbaday in aqalka Senetka uu daaqadda ka tuuro dacwadda loo heysto madaxweynaha.
Qareenada oo soo saraay war qoraal ah ayaa qorshaha xil ka qaadista ku tilmaamay “mid khatar ku ah dastuurka Mareykanka”.
Dhanka kale guddiga aqalka sare u qaabilsan geedisocodka dhageysiga dacwadda ayaa soo saaray war ay ku sheegeen in madaxweyne Donald Trump uu ku kacay musuqmaasuq, si uu u khiyaano doorashada xigta.
Aqalka Seneteka ayaa lagu wadaa in maalinta talaadada uu bilaabo dhageysiga dacwadda loo heysto madaxweynaha oo ay kamid tahay a ku takrifal awoodeed.
Inta ay socoto dhageysiga dacwadda loo heysto Trump, aqalka sare waxaa uu maalintii lix saac dhageysan doonaa doodda la xiriirta xil ka qaadista, waxaana shir guddoomin doona guddoomiyaha maxkamadda ugu sareysa Mareykanka, John Roberts.
Trump ayaa waxaa uu noqonayaa madaxweynihii saddexaad ee Mareykan ah ee dacwadda xil ka qaadistiisa loo gudbiyo aqalka sare.
Xildhibanaada aqalka sare ayaa xilka ka qaadi kara Trump, waase haddii 67 kamid ah xildhibaanadaas ee gaaraya 100 ay u codeeyaan.
Aqalka sare ee Mareykanka ayaa waxaa kamid ah 47 xildhibaan oo katirsan xisbiga Dimuqraadiga, waxaana loo baahan yahay 20 xildhibaan oo katirsan isla xisbiga uu Trump ka tirsan yahay ee Jamhuuriga, si xilka looga qaado Trump.
Trump ayaa xilliga ay socoto dhageysiga dacwadiisa waxaa uu ku sugnaan doonaan magaalada Davos, hallkaas oo uu ka furmayo madasha dhaqaalaha adduunka.
Dhanka kale hogaamiyaha xibsiga Jamhuuriga ee aqalka Senetka, Mitch McConnell, ayaa daaha ka rogay qorshe la doonayo in lagu dedejiyo dacwad oogista madaxweyne Trump.
Mr McConnell ayaa soo jeediyay in qareenada difaacaya madaxweyne Trump iyo kuwa matelaya xisbiga dimuqraadiga la siiyo min afar iyo labaatan saac, si ay usoo gudbiyaan dooda ku aadan dhageysiga dacwadda loo heysto Madaxweynaha.
Qareenada Trump ayaa soo saaray warbixin ka kooban 171 bog, kahor dhageysiga dacwadda, waxaana ay ku doodayaan in haddii ay jiraan qaladaad uu galay madaxweynaha aysan ahayn kuwa xilka looga qaadi karo ama dacwad lagu soo oogi karo.
Madaxweyne Donald Trump ayaa lagu eedeeyay in dhiggiisa Ukraine uu cadaadis ku saraay in uu baaritaan ku sameeyo madaxweyne ku xigeenkii hore ee Mareykanka Joe Biden oo ay isku hayaan siyaasadda Mareykanka, haseyeeshee arrintaas ayaa waxaa ay horseeday in aqalka Kongreska uu u codeeyo xil ka qaadista Trump, taas oo haatan ay go’aan ka gaari doonaan aqalka sare.
IMF oo Malaayiin Dollar ugu deeqday Somalia